ကျွန်တော်သိသလောက် အပြင်ကျောင်းများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » ကျွန်တော်သိသလောက် အပြင်ကျောင်းများ
Posted by ကထူးဆန်း on Apr 12, 2012 in Editor's Choice, Education | 28 comments
ပြောရရင်တော့ လူပျင်း အလုပ်လုပ်တာပါ။ အသေးစိတ် မေးပေးမယ် စိတ်ထဲတို့ထားပေမဲ့ အချိန်မပေး မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
သူကြီး တစ်ခါက ရန်ကုန်က ကျောင်းတွေ အကြောင်း သိချင်တယ် ။ ပြန်လာမဲ့ သူတွေ ၊နိုင်ငံခြားသားလေးတွေ အတွက် ဘယ်ကျောင်းဘယ်လိုထားမလဲ ဆိုတာ တင်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ်လို့ အကြံပေးခဲ့ဘူးပါသည်။
နိုင်ငံခြားမှ ဆိုတော့ ကွန်နက်ရှင်လည်း ကောင်းသည်မို့ ရှာ၍ ရသော ကျွန်တော် သိသော ကျောင်းများ၏ web address များသာ ရှာ၍တင်ပေးလိုက်ပါသည်။
၁. International School Yangon
အမေရိကန် စံနစ်လို့ သိရပါသည် ။ ကျွန်တော် သိသလောက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဈေးအကြီးဆုံး ကျောင်းပါ။ တစ်ချိန်က ပိုက်ဆံရှိတာတောင် မြန်မာများ ၀င်ခွင့်ရရန် မလွယ်ခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့ တော်တော် ဖြေလျှော့ပေးလိုက်ပါသည်။ ၀င်ခွင့် စာမေးပွဲ လည်း လုပ်တယ်လို့တော့သိရပါသည် ။
Address:20, Shwe Taungyar
Telephone: 512793, 512794, 512795
၂။ Diplomatic School Yangon
ဒီပလိုမက်တစ်ဆိုပေမဲ့ မြန်မာလေးများ လည်း ရှိပါသည်။ အင်္ဂလ်ိပ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း နဲ့ သင်ကြားတယ်လို့သိရပါသည်။ ၄င်းတို့၏ web address ရှာဖွေကြည့်သော်လည်း မတွေ့ ရှိရပါ ။ facebook စာမျက်နှာသာ တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
No.65 Shin Saw Pu Road, Sanchaung Township, Yangon, Myanmar.
၃။ International School of Myanmar ( formerly Yangon International Educ Care )
လိပ်စာ ကတော့ www.ismyanmar.com ဖြစ်ပါသည်။ ဆရာများအားလုံး Native English Speaker များဖြစ်ပြီး လက်ထောက်ဆရာများကတော့ မြန်မာ များဖြစ်ပါသည်။
W -22 Mya Kan Thar Main Road
Mya Kan Thar Housing
၄။ Yangon International School
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူသိများတဲ့ ILBC (International Language and Business Center) မှ ဖွင့်သော ကျောင်းခွဲဖြစ်ပါသည်။
Phone: (95-1) 578171, 573149
Fax: (95-1) 578604
၅။ILBC (International Language and Business Center)
သူကတော့ မြန်မာကျောင်းသားများ ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အချို့ မြို့များ မှာလည်း ကျောင်းခွဲများဖွင့်ထားပါသည်။
ILBC IGCSE School: No.34, Laydauntkan Road, Tamwe Township Yangon, Myanmar.
Telephone: 01-542982, 545720, 545736, 400156
Email: info@ilbc.net.mm , recdept@ilbc.net.mm
၆။ Horizon International School
American curriculum သင်ကြားတယ်လို့ သိရပါသည်။
Shu Khinn Thar Campus
235, Shu Khinn Thar Pat Road, Takayta Township, Yangon
Contact : 450396
7။ Myanmar International School
MIS offersabroad and balanced curriculum, Nursery – Year 13, modeled on the internationally recognised educational programmes developed by Cambridge International Education (UK).
Ph: 95-1-558115~18 Fax: 95-1-55819
၈။ Myanmar International School Yangon
သူလည်း UK curriculum သင်ကြားသည်ဟု သိရပါသည်။
Address – No.29, Pyay Road
7 Mile, Mayangone Tsp, Yangon,
Phone – 660 565, 655 553, 728 756, 09 500 5555
(If phoning from abroad pls press the numbers with 951 then the school numbers)
Email – misy-edu@goldenland.com.mm
Website – www.misyedu.com
အသေးစိတ်ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုကြပြီး ဘယ်ကျောင်းရွေးချယ်ရမလဲ ဆုံးဖြတ်နိုင်လောက်ပြီ ဟုထင်ပါသည်။ ကျောင်းနံမည်တွေက တော့ ဆင်ဆင်မို့လို့ သေသေချာချာ ပြန်မှတ်ဖို့တော့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော် ကြားဖူးသော အင်္ဂလိပ်လို သင်ကြားပြသသော pre-kg မှ grade-12 အထိ သင်ကြားကြသော ကျောင်းများဖြစ်ပါသည်။
မပါဝင်သည်များ လည်းရှိနေသေးပါ၍ သိရှိပါက ၀ိုင်းဝန်းအားဖြည့် ပေးစေလိုပါသည်။
NIEC, PISM, MLA, TOTAL ( UK curriculum ) အစရှိသော ဈေးနှုန်းသင့်တင့်သောကျောင်း များလဲရှိပါသည်။ MISY, MIS, Yangon Academy ( American curriculum ) ကဲ့သို့ဈေးကြီးသောကျောင်း များလဲရှိ ပါသေးသည်။ လဲရှိပါသေးသည်။
NIEC, PISM, MLA, TOTAL ကျောင်းတွေက မြန်မာငွေနဲ့ပေးရပါတယ်။ တနှစ်စာကို သိန်း 20 လောက်ခန့်မှန်းချေရှိပါတယ်။ အတန်းငယ်တွေပေါ့။ ကြီးရင်တိုးသွားပါတယ်။ MISY, MIS, Yangon Academy ကတော့ ဒေါ်လာနဲ့ရှင်းရပါတယ်။ တနှစ်စာကို usd 4200 လောက်နဲ့ အနဲဆုံးစပါ တယ်။
၉၃ (G) သံလွင်လမ်း . ရန်ကုန် ။ ဖုံး .. ၅၂၅၉၆၂ ။ ၅၂၅၉၆၆ ။ http://www.niceinternational.com / e-mail. niec@myanmar.com.mm
No.၁၀-၂၃ အောင်ချမ်းသာ ၄လမ်း အောင်မြေသာစည် အိမ်ယာ။ ကမာရွတ် ။ ရန်ကုန်
Phone : 22167 , 530640,530641,503688
No. 36 Wingabar Road , Bahan , Yangon
Tel : 548905 , 705066 ,552839
က ရန်ကုန်မှာ တင် ၆ နေရာလောက်ခွဲဖွင့်ထားပါသည်။
၂၂ (က) ကမ္ဘာအေးဘု၇ားလမ်း ဗဟန်း ရန်ကုန် ။
ဖုန်း ၅၄၂၃၅၇။ ၇၂၅၇၈၈
ဒီကျောင်းတွေ လည်း အခြေမခိုင်သေးဘူးလို့ထင်မိပါကြောင်း ။ pre-school ကနေ high school အထိ သင်နိုင်နေကြပြီလား ။
PISM ကတော့ ကျွန်တော်မသိပါ။
PIEC နဲ့ PISM အတူတူပါပဲ။ နာမည်ပြောင်းထားတာပါ။ သူတို့တွေရဲ့သက်တန်း ကတော့ တော်တော်ကြာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ အခြေတော့တော်တော်ခိုင်နေပါပြီ။ NIEC က ဆို ၅ နှစ်လောက်ရှိပြီ။ သူ့မူရင်း NELC ကတော့ ၁၀ နှစ်လောက်ရှိမယ်။ PISM ( PIEC ) ကတော့ ၂၀၀၁ ကထဲကစဖွင့်တာ။ MLA လဲ ၈ နှစ်လောက်တော့ရှိပြီမို့ အခြေမခိုင်ဘူးလို့ပြောလို့မရပါဘူး။
NIEC ကတော့ အခုတနှစ်တတန်းတိုးဖွင့်နေတာ Secondary ထိဖွင့်နိုင်နေပါပြီ။ PISM ကတော့ ၁၂ တန်းထိဖွင့်နိုင်ပြီး GCE A, O level တွေပြီးတာတော်တော်ကြာနေပါပြီ။ Total ကလဲ အနဲဆုံးမရှိဘူးဆို ၈ နှစ်နဲ့ ၁၀ နှစ်ကြားရှိပါပြီ။ ၁၂ တန်းထိဖွင့်နိုင်နေပါပြီ။ သူလဲအခြေခိုင်ပါပြီ။ MISY ကတောင်မှနောက်ကျပါတယ်။ ၂၀၁၀၉ -၂၀၁၀ လောက်မှဖွင့်တာပါ။ သူကတော့ အငြိမ်းစားဗိုလ်ချုပ်သားတယောက်ဖွင့်ထားတာပါ။ MIS ကလဲသူ့ထက်နောက်ကျပါတယ်။ အားလုံးကတော့ အတန်းကုန်ထိဖွင့်ထားပါတယ်။
ကျေးကျေးပါ သဲနုအေးရေ. ကျွန်တော် သူတို့ အတန်းကြီးတွေ အထိ ဖွင့်နိုင်နေပြီမှန်းမသိခဲ့ဘူး။ primary နဲ့ secondary တွေလောက်အထိဘဲဖွင့် နိင်ကြတယ်ထင်နေတာ။Total ဆိုကျောင်းခွဲတွေ နေရာတွေလည်းခွဲဖွင့် ဆိုတော့ ကျောင်းကြီး တစ်ခုအနေနဲ့ သေခြာမမြင်မိဘူး။
Yangon Academy ကတော့ လုံးဝ မသိဘူး ။ လိပ်စာရှိရင် တင်ပေးပါဦး ။
ဟုတ်ကဲ့ Yangon Academy က အမေရိကန်သံရုံးနားမှာပါ။ လိပ်စာအတိကျကတော့ မေးပြီးတင်ပေးပါ့မယ်။
(Myanmar International School Yangon) MISY နဲ့ (Myanmar International School) MIS က UK Curriculum လို့ သူတို့ web site တွေမှာ ရေးထားတယ် သဲနုအေးရေ..
မဟုတ်ဘူးကိုထူးဆန်းရဲ့။ သူက ၇ တန်းလောက်ထိ ( American curriculum )၊ အထက်တန်းရောက်မှ UK Curriculum ဖြစ်သွားတာ။ ဘယ်လိုစနစ်နဲ့ သွားလဲတော့မ သိဘူး။ နှစ်မျုိးလုံးသင်တာပေမဲ့ ကလေးတန်းကိုတော့ ( American curriculum ) နဲ့စတာ။ အဲဒါကြောင့်လဲ အတန်းကြီးလာရင်အဆင်မပြေကြတော့လို့တချို့လဲ အတန်းကြီး မှ ( American curriculum ) နဲ့ဆက်သင်တဲ့ကျောင်းပြောင်းသွားကြတယ်။ ကျွန်မကသူတို့ကျောင်းသွားကြည့်ဖူး လို့သိတာ။ စာအုပ်တွေပါကြည့်ဖူးတယ်။ တအုပ်ကို ၁ သိန်းခွဲလောက်တန်တယ်။ အော်ရီဂျင် နယ်တွေ။ ကလေးတွေကိုအပိုင်မပေးပါဘူး။ ငှားသင်ရတာပါ။ ကျောင်းကနေ။ နောက်ပြီး (Myanmar International School Yangon) MISY မှာက ဥာဏ်ရည်နိမ့်တဲ့ကလေးတွေအ တွက်ပါ care class သီးသန့်ရှိပါတယ်။ သူကတော့ဈေးနှစ်ဆလို့ပြောပါတယ်။ တော်တော်ဥာဏ် ရည်တက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။
အင် ..အဲ့ဒီလိုကြီးလား …
ကျနော်သိသလောက် နယ်ကကလေးတွေအတွက်က အစိုးရကျောင်းသာ
အားထားရာပေါ့။အဲ့ကျောင်းတွေမှာ တက်နေတဲ့ကလေးတွေ မြန်မာစာကို
ရေးဖို့ မတတ်တော့တာကို ရင်နာမိတယ်။
အမှန်ဘဲ ကိုသန်းထွဋ်ဦးရေ .. မြန်မာစာ အပြင်မှာပြန်သင်ရင်သင် မသင်လို့ကတော့ မတတ်ပါဘူး။ သချာင်္မှာလည်း မြန်မာအစိုးရကျောင်းက ကလေးတွေလောက် မကောင်းပါဘူး။ အဲ.. ကွန်ပြုတာတို့ အင်္ဂလိပ်လိုတွေကတော့ အလွန်ကွာသွားတာပေါ့ ။
ကျနော့် ညီဝမ်းကွဲတစ်ယောက်ကို မြန်မာစာတတ်အောင်ဆိုပြီး
ယူအက်စ်ကနေ.. မြန်မာပြည်ပြန်အခြေချမယ့်သူတွေ.. အမြဲမေးကြတယ်..။ ကလေးတွေအတွက်.. ဘယ်ကျောင်းမှာထားရမှန်းမသိ.လို့တဲ့..
အရင်တုန်းက ဦးဖိုးကျားရဲ့ စာသင်ကျောင်းလေးကို သတိရမိတယ်ဗျာ။
Dr.AKKO ရေ. ပြန်ရဖို့ မလွယ်တော့ဘူးနော်။
ခေတ်ကိုက ပိုက်ဆံမရှိရင် ပညာသင်ဖို့ ခက်မယ်။
iGCSE ဆိုရင်တော့ Regent Elite Academy ရှိတယ်။ Grade 1 ကနေစဖို့တော့ ကြိုးစားနေတယ်။ အခုလာမယ့် academic term မဟုတ်ရင် နောက်နှစ်တော့ သေချာတယ်။ http://www.regent-myanmar.com မှတဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
IGCSE ဆိုရင် UK Curriculum ပါ။ သူကတော့ KG, Primary ကနေစပါတယ်။ American curriculum ဆိုရင်တော့ TOFEL ပါ။ သူကတော့ Grade 1 ကနေစပါတယ်။ အခုဖွင့်မယ့်ကျောင်းကဘာ Curriculum ပါလဲ။ သိထားရအောင်လို့ပါ။
ALBA ဆိုတာရှိသေးတယ်။ မေးကြည့်ကြပါလား။
သများတို့ကတော့ ဘာမှမသိဘူး မှတ်ထားမယ် သများကလေးကျရင်ထားဖို့လေ …….. ကျေးကျေးပါနော် ကိုထူးဆန်း ……..
Horizon ဆိုတဲ့ကျောင်းလဲရှိသေးတယ်။ ဖိုးစိန်လမ်းထဲမှာ နဲ့ သံလျှင်တံတားအဆင်းနားမှာ
Horizon ကပါပြီး ပြီလေ။ နံပါတ် ၆ မှာ။ ရူခင်းသာ က သံလျင်တံတားအဆင်းနားကိုပြောတာလေ။
ABSDF ဆိုတာ ထိုင်းနယ်စပ်မှာ ရှိတယ်။ ကျောင်းလခ ပေးစရာ မလိုဘူး။ မြန်မာအစိုးရကတော့ အမေရိကန်က ထောက်ပံ့ပေးတယ်နဲ့ မနာလို တော်တော်ဖြစ်ပုံရတယ်။ အဲဒီမှာ သဂျီးမိတ်ဆွေ ခလေးတွေကို ထားကြည့်ခိုင်းပါလား။
ဦးကြောင် ကလေးတွေထားပြီးရင် အကျိုးအကြောင်းပြန်ပြောနော် ပြောဖို့ ကလည်း ဦးကြောင် က အခုမှ တွေ့ သမျှချိန်တုန်းဆိုတော့ ….. :grin:
At the diplomatic school, it is accepted about 15 students for pre college program.
it has entrance exam ( for 11 grade passed students ) and the course is 1 and half year long. The cost forastudent
is 4500 US$. After the course, it can apply to US Colleges/ University.
My son is studying at the US colleges with 100 % scholarship after that pre college program.
ဦးဦးပါလေရာ ပြောတဲ့ ALBA က ကျောင်းတစ်ခု အနေနဲ့ အခြေ မခိုင်သေးဘူးလို့ထင်ပါသည်။ ကျွှန်တော်မှားကောင်းမှားနိုင်ပါသည် ။
Language အဓိကထား သင်တဲ့ ကျောင်းဖြစ်နေမလားလို့ ။ သူဆီမှာ အောက်ဖော်ပြပါ program တွေရှိတယ် ဆိုတော့ …
Cambridge Lower Secondary (Sec 1-3) (Age 11-14)
Special English Classes for Adult
Special English Classes for Children (age 5~14)
Weekend Young Learners Classes
Corporate Training Classes For Foreign/ Local Companies’ Staff
66, Shwedagon Pagoda Road
Near Nawaday Street
Tel : 0973011426, 0973154742, 376314, 376236, 384055
Fax : (95)1-384055
Email : admin@albaedu.com , teacher@albaedu.com
Website : http://www.alba-edu.com
အိမ်က အလတ်ကောင်ကို ဘယ်ကျောင်းထားရမလဲ စဉ်းစားနေတာနဲ့ကွိတက်ပဲဗျာ…
အူးပါတို့ လဲ စိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ ရပြီထင်ပါ့ဗျာ
ကျုပ်က ဒီလောက်မိုက်ပါ့မလား ဗိုက်ကလေးရယ်…
(ပိုက်ဆံမတတ်နိုင်တော့လဲ စပျစ်သီး ချဉ်တယ် ပြောရတော့တာပေါ့.. )
ပုံမှန်အတိုင်း အစိုးရကျောင်း + ကျုရှင် + ဂိုက် + ၀ိုင်း
ဆာ့ဆာကြီးတွေဝိုင်းမှာ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဝင်ဖေါလ်းအုန်းမှ
ကလေးတွေတွက် ဘာညာကွိကွ အလားအလာလေးရှိတယ်ဆိုတာလေးသိရဘူးလား
ကျုပ်မှာ ကလေးရှိလို့ဟုတ်ရပါဘူး ကလေးတို့အမေမရှိတော့ ကလေးလည်းဘယ်ရှိမတုန်းနော
ကျုပ်လိုသတ္တဝါရဲ့ နှစ်ပဲတစ်ပြားစည်းစိမ်လေးနဲ့ တတ်နိုင်မည်မထင်